10 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-09T21:45:56+00:00 2020-01-10T00:00:41+00:00 0 Views
NDINE makore 25, ndinodawo shamwarikadzi yekuvaka nayo imba asati ambozvara uye ane makore 18 kusvika 24. Ari pamushonga kwete, nhare yangu 0782 805 089.
Ndiri mukadzi ane makore 28, ndinodawo murume wekufambidzana naye ari pachokwadi uye asiri pamushonga. Anoda ngaandibate pa0775 565 912.
Ndiri musikana ane makore 26 handisi pamushonga, ndogara kuBindura uye ndinotsvagawo mukomana ari pachokwadi akazvipira kunotorwa ropa. Ngaave asiri pamushonga ari kuda zvekuroora kwete zvekutizisa, nhamba dzangu idzo 0771 869 794.
Ndiri murume ane makore 38 ndodawo mukadzi ari pachokwadi ane makore 30 kusvika 35. Ini ndoita zvekurima, andida ndibate pa0771 125 195.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37 nevana 3 uye ndiri HIV positive. Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 34 zvichidzika ane vana anoda zvemba. Ndinogara kwaMutare, andida ndibate pa0771 388 358, titaure.
Makadii? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane makore 20 – 30, ndibatei pa0774 959 448.
Makadii? Ndiri murume ane makore 33, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 30 ane vana 2 kana 1. Handisi pachirongwa, vanondida munofona pa0713 306 958.
Makadii zvenyu? Ndiri murume ane makore 45, ndinotsvaga mukadzi wekudanana naye ane makore 20 kusvika 30 asina chirwere. Andida ngaandibate pa0712 850 517.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 33, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora, ndine vana 2 uye ndiri pamushonga. Anenge andifarira nhare dzangu 0718 595 208.
Makasimba here? Ndiri murume ane makore 42 ndotsvagawo mukadzi ane makore 35 kusvika 40. Ndinobatika pa+27 626 713 862.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26 ndotsvagawo musikana ane makore 18 – 22 anoda zvemba uye asina chirwere. Nhamba dzangu 0774 228 130.
Ndinotsvagawo mudzimai ane chimiro chakanaka asinganyadzise ndapota hangu. Ngaave nemakore 19 zvichidzika, nhamba dzangu 0774 273 029.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 34 ndinotsvagawo musikana kana mudzimai ane mwana 1. Anoda zvekuroorwa ane makore 20 kusvika 30, asiri pamushonga. Vanoda ndibatei pa0782 120 218.
Ndiri kudawo musikana ane makore 18 kusvika 21 asiri pachirongwa, ini ndine makore 23. Andida anofona pa0787 512 145. Matsotsi regai kupedza nguva yenyu.
Makadii? Ndiri murume ane makore 36, ndoda mukadzi ari pamushonga ane mwana mumwe kana ngomwa ane makore 32 zvichidzika. Nhare yangu 0776 323 021.
Ndiri murume ane makore 37, ndinodawo mukadzi ane makore 23 zvichikwira. Ndoda akasimba, ane mahips nemazamu akati kurei, vave mai vane rudo chairwo. Vanoda ndibatei pa0771 270 452.
Makadii? Ndiri murume ane makore 42, ndodawo yangu nyenyedzi yekuroora kwete yekutambisa inofarirawo mvura. Ngaave nemakore 20 kusvika 35 aine mwana kana asina. Matsotsi musafone zvenyu ndaneta nemi, ari serious anobvumirwa kundibata pa0771 763 792.
Ndiri murume ane makore 42, ndodawo mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 35. Ane 1 mwana kana asina anoda ngaandibate pa0771 763 792.
Makadiiko veTishamwaridzane? Ndazama ndazamazve asi handisati ndaona rubatsiro. Ndiri kutsvagawo mudzimai ane makore 27 kusvika 35. Ini ndine makore 45 uye ndiri pachirongwa. Ndoda ane rudo ane mwana 1 achishanda. Ngaave akatendeka, akarongeka uye asingaoneki kuti anorwara. Vanhu vanotora chirongwa sedambe kwete. Nhare yangu 0719 238 711.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 33, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora uye ndine vana vaviri. Ndiri pamushonga, anenge andifarira nhare dzangu 0786 642 766.
Makadii? Ndiri murume ane makore 47, ndotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 38 – 45. Ndakafirwa nemukadzi uye ndine mwana 1. Ndobatika pa0788 581 720, masms ndopindura, ndatenda.
Ndiri murume ane makore 43 nevana 3, ndodawo mudzimai wekuroora. Ndibatei pa0776 905 473.
Ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora ari pachokwadi uye ari pamushonga anogara Harare kana Chinhoyi. Ngaave ane makore 30 kusvika 34 ari pachokwadi. Nhare yangu 0784 863 124.
Makadii zvenyu? Ndiri murume ari kutsvaga mukadzi wekushamwaridzana naye. Ndine makore 45 uye ndinoda ari pachokwadi. Nhamba dzangu idzi 0717 600 582. Ndiri kuChi-town.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana wemakore 27, ndinotsvaga musikana wekuroorana naye ane makore 21 kusvika 26. Andifarira ndibate pa0774 432 150.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 35 ndinogara kuChitungwiza uye ndine vana 2. Ndinotsvagawo murume ane makore 39 – 45 ari HIV positive asati ave pamushonga. Varume vevanhu handidi. Nhare yangu 0712 726 749.
Ndine makore 40, ndinoda mukadzi anofarira kugara kumusha achichengeta zvipfuwo. Nhare yangu 0717 146 698.
VeKwayedza makadii? Ini ndakambonyorera asi handina kuwana wandaida. Ndiri kusangana nematsotsi, ndiri murume ane makore 39 nevana vaviri uye handirware. Ndodawo mudzimai ane makore 20 kusvika 25 ane mwana kana asina. Ngaave anotya Mwari, ndiri muHarare.
Anodida ngaandibate pa0719 137 658.
Ndiri murume ane makore 45, ndiri pamushonga asi handiratidze uye ndodawo mukadzi ari pamushonga tifambidzane. Andida totaura pa0776 586 669.
Makasimba here vabati vechirongwa cheKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 38 ekuberekwa, ndinodawo shamwari yechirume ane makore 39 – 40 asina chirwere. Ndine mwana 1, ndoda munhu anoda zvemusha. Mazvita, nhare yangu 0777 037 864.
Munofara here veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40, ndodawo mukadzi wekufambidzana naye ane makore 25 – 35. Nhare yangu 0714 627 936.
Ndiri murume ane makore 40, ndinotsvagawo mukadzi wekufambidzana naye ane makore 25 – 35 anoziva rudo. Ndibatei pa0714 627 936.
Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mudzimai ane makore 25 zvichidzika anotya Mwari uye asiri pamushonga. Ndinoshanda, ndiri farmer zvakare. Anoda nezvangu ngaandibate pa0786 663 011.
Kwayedza ndiri musikana ane makore 34 asi handikwanisi kufamba. Ndinotsvaga murume angandidewo anoda zveimba. Andifarira anondibata pa0771 757 404.
Makadii? Ndotsvakawo mukadzi ari serious nekuroorwa. Ndine makore 47 uye ndiri HIV negative. Anoda zvemusha ngaandibate pa0733 010 299.
Ndiri murume ane makore 40, ndotsvagavo mudzimai wekuwadzana naye. Anoda ngaandibate pa0772 538 985.
Ndinotsvagawo murume ane makore 30 kusvika 35. Ini ndine makore 27 nemwana mumwechete. Nhare yangu 0786 525 390.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37, ndinotsvagawo mudzimai anoda zvemba ane makore 25. Matsotsi kwete, nhamba yangu 0785 900 798.
Ndiri murume ane makore 40. Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 45 zvichikwira. Ndobatika pa0774 627 081.
Makadiko? Ndiri murume ane makore 33, ndodawo mukadzi wekuroora ane makore 18 zvikwira ane mwana kana asina. Ngaave anoshanda, andifarira ndibate pa0782 472 226.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndotsvagawo musikana ane makore 27 kusvika 23. Ada ngaandibate pa0779 167 254.
Ndiri murume ane makore 55, pensioner. Ndiri kutsvaga mukadzi anoda zvekuroorwa. Anondibata pa0716 163 029.
Ini ndiri mukomana ane makore 24 okuberekwa, ndinotsvagawo shamwarisikana yekufambidzana nayo ane makore 22 zvichidzika. Nhare yangu 0776 257 085.
Makadii zvenyu veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 30 kusvika 40. Ndinodawo akasimba, akanaka anoshanda. Anenge andida anondibata pa0782 493 670.
Ndiri mukomana ane makore 36, ndinodawo musikana kana mudzimai ane mwana mumwechete ane makore 22 kusvika 32 asi asiri pamushonga nekuti ini handisi. Ndinoda anonamata uye achityawo Mwari, vanenge vari serious ngatititaurei pa0719 991 858.
Kwaziwai, ndiri murume ane makore 39 uye murefu, mushava, akanaka nevana 2. Ndodawo mudzimai akarongeka anoda zvemba. Andifarira ngaandibate pa0775 333 162.
Hello Zimbabwe, ndoitwa Livingstone uye ndotsvakawo mudzimai anoda zvemusha. Ndiri mukomana ane makore 25 nemwana mukomana ane makore maviri. Ndinowanika pa0779 397 944, zvizere tinozviwana mukutaura.
Makadii veKwayedza? Ndotsvagawo mudzimai anoda kuvaka musha asina chirwere uye asingashushire mari. Anofona totaura zvakawanda pa0733 156 395.
Ndinodawo mukadzi wekuroora ane makore 32, ndiri muHarare. Runhare 0715 823 534.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane vana vatatu, ndine makore 34 uye handisi pamushonga. Ndinozvishandira, ndoda murume ari pachokwadi chekuroora ane makore 40 zvichikwira. Nhare yangu 0717 018 050.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 30, ndotsvagawo mukadzi ane makore 26 kusvika 38 anoshanda uye ane mwana mumwe kana vaviri. Andifarira ngaandibatewo pa0716 626 585.
Makadii? Ndiri murume ane makore 31, ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 28 wekuroora asiri pamushonga. Ngaave munaku anonamata, kunyanya vekuMasvingo. Runhare rwangu 0771 841 091.
CHIRONGWA chino ndeche vanhu vari pachokwadi avo vari kutsvaga shamwari (penpals) pamwe neavo vari kutsvaga wekuroorana naye.
Naizvozvo vose vanotumira maSMS avo kuchirongwa chino ngavave vanhu vari pachokwadi uye voshandisa nhamba dzenharembozha dzavo chaidzo.
Hachipo kuparadza dzimba dzevanhu nokudaro avo vakawanikwa nevakaroora havakurudzirwe kunyorera kuchirongwa ichi. — MUPEPETI.